“श्री’मान बाहिर,नेपा’लमा श्री’मती गर्भ’वती !! क’सको ब’च्चा भने’र सोध्दा’ उन’को जवाफ’ले सबैको होस् उडायो , भीडीयो हेर्नुहोस” – Krazy NepaL
November 22, 2020 565
विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा ‘घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् ।’ अहिले बा’हिर आए’को समा’चार भा’रत बिहा”र राज्यको हो । जगदीश’पुर ”पुलिस क्षेत्र य’हाँ छ । यहाँ एक ‘महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको” नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगे”की थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ‘?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ ।
तब सम्म ‘सबै कुरा ”ठीक थि’यो । महिलाको’ नन्दका ‘अनु’सार उनकी भाउ’जु ती’न महिनादेखि गर्भव’ती भइन् । जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महि’ना देखि कोलकाता’मा छन् । सात महिना देखि भे’टघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन्।
दैनिक भास्करका अ’नु’सार नन्द यस बारे आ’क्रोशि’त थिइन् ‘। उनी डिआइ’जी विकास विभवसम्म पुगिन् । उनले डिएनए परीक्षणको मा’ग गर्न थालिन् । जब डाक्टरहरूले अनुसन्धान गरे, तब यो पत्ता लाग्यो कि बच्चा तीन”महिनामा १२ दिनको भएको रहेछ ।नन्द रिसाए’को मात्र थिइनन्, महि’लाका ‘पतिले पनि यो ‘को हो भनेर प्रश्न गर्न ‘थाले ? अब ”ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ। उन’ले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँ’ग राती सपना’मा आए’र पतिले’ यौ’न स’म्बन्ध राखे’को अनी ‘बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।
तर, जब सम्पूर्ण’ परिवारलाई यो थाहा भयो, ती महिलाले भ”निन् कि यदि तपाईले मलाई घरमा राख्न चाहानुहुन्छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म तिमीलाई केही झुठो केसमा फसाउनेछु। तर यस धम्कीको कुनै असर भएन र परिवारले त्य’सलाई घरमा राख्न मानेन ।
कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका स’दस्यले महिलालाई सा’थमा राख्न अस्वीका’र गरेपछि पञ्चायत बसे । त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा ”उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र’ यही कारणले गर्दा उनी’ गर्भवती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन् ।
यो पनि बलिउड अभि’नेत्री करीना ‘कपुर खा’नले सैफअलीका’ ‘पुर्व पत्नि अमृता सिंह’संग जीवनमा कहिल्यै प’नि भेट ‘नभएको बताएकी छन् । उनले सो कुरा बलिउडका निर्देशक तथा निर्माता करण जौहरको कार्य”क्रम ‘कफी विथ करण ६’ मा बताएकी हुन् ।************भीडीयो’को पुरा’ लिं’क त’ल रहे’को छ *************
जु’न कुराको खुलासा करिनाले गरिन्, त्यो कुरा सुनेर कार्यक्रमका होस्ट करण त आश्चर्यमा परे परे ‘साथसाथै करिनाको उक्त कुरा सुनेका सबै र त्यो कार्यक्रम हेरिरहेका सबै सो”’शल मिडि’याका’ यूजरहरु पनि आ’श्चर्यमा नै परे । क’रिनाले उक्त कार्य’क्रममा अमृतासँग आफ्नो भेट नै नभएको र सैफसँग ‘भेट्दा अमृतासँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेको बता’एकी थिइन् ।
करिनाको यो कुरा सुनेर अमृता र सैफ’का छोरा’छोरी सारा र ‘इब्राहीम पनि’ रिसाए”को खबर बाही’रिएको छ । ख’बरका अनुसार करिनाले आफ्नो आमा’संग कहिल्यै भेट नभएको भनेर भन्नु भनेको आफ्नी आमाको बेइजत गरेको छोरी सारा र छोरा ईब्राहीमले बताएका छन् । उनीहरुले करिना कुनै आउट साईडर नभएको हुनाले आमा बुवाको विबाहदेखि उनीहरुको प्रेमको चर्चा र फिल्मी क्षेत्र एउटै भएको बताउँदै सानैदेखि करिनाले आमा अमृतालाई देख्दै आएको पनि बताएको कुरालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा उदृढ गरिएको छ ।
अभिने’त्री ‘करीना अहिले ‘दोस्रो”पटक ग’र्भवती भएकी छन् । गर्भवती भएपछि उनी चर्चामा आएकी छिन् । उनले बलिउडका अभिने’ता सैफ अली ‘खा’नसँग सन् २०१२ मा ‘विवा’ह गरेकी थिइन् ‘। उनका एक’ छोरा तैमूर समेत वि’भिन्न कारण” चर्चामा आइरहन्छन् । सैफले करी”नाभ’न्दा अगाडि सन्’ १९९१ मा’ अमृ’ता सिंह”सँग विवाह गरेकी थिइन् । तर उनी’हरुको सन् २००४ मा सम्ब’न्ध’विच्छे’द भएको’ थियो ।
************भीडीयोको पुरा लिंक तल रहेको छ *************
Prev“सरकारको नेतृत्व गर्नेले विवेक गुमाएपछि हरेको ठाउमा दुख पाउछ यो सुरुवात मात्र हो : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल”
Next“प्रचण्ड र नेपाललाई ठुलो,झड्का ओलीले देउवालाई आठ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव”
“आटी का’ण्ड ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भि’डियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस)”